आर्थिक 📈 Archives - Page 20 of 174 - Safal Awaj Safal Awaj
अब जग्गा दर्ता र नामसारीकाे काम घरबाटै गर्न सकिने
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले जग्गा दर्ता र नामसारीकाे काम घरमै बसेर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै जग्गा दर्ता, नामसारीलगायत जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सक्ने घोषणा गरेका हुन् । पौडेलले मालपोत कार्यालयका सम्पूर्णा कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरेर जग्गा प्रशासनको काम प्रविधिको प्रयोग गरेर घरबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘जग्गा सम्बन्धी सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ । सबै मालपोत कार्यालयमा… पुरा पढौ
काठमाडौं, १६ जेठ । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य तोलामा दुई सय रुपैयाँ बढेको छ । आइतबार सुन तोलाको ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार तोलामा ४ सय रुपैयाँ घटेको सुनको मूल्य आइतबार भने दुई सय रुपैयाँ बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रति औंस १९ सय डलर नाघेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य अनुसार नेपालमा सुनको मुल्य निर्धारण हुन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपनि डलर कमजोर भएकाले नेपालमा थोरै मात्र… पुरा पढौ
विद्युतीय सामानमा प्रोत्साहन, पेय पदार्थमा कडाइ
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले करदातालाई राहत र सहुलीयतलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व नीति र करको दायरा निर्धारण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सरकारले मानव स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट र्सिजित प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई राहत र सहुलीयतसहित राजश्व नीति र करको दायरा निर्धारण गरेका हुन्। सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको कर योग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले अघिल्लो आर्थिक… पुरा पढौ
बजेटका १० प्राथमिकता : कुन क्षेत्रमा कति ? स्रोत के हो ?
काठमाडौं, १६ जेठ। सरकाले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएर सबैको मन जित्ने कोशिस गरेका छन्। बजेटप्रति सधै असन्तुष्ट रहने निजी क्षेत्रलेसमेत बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलले भने चुनावमा मतका लागि रकम वितरण गरिएको भन्दै बजेटप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्। कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब ठूलो हो। बजेटको आधार बढ्दा स्रोत जुटाउन कठिन हुने… पुरा पढौ
तीन अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य विमानस्थलका लागि रु २० अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडाैं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न रु २० अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेकाे बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सौन्दर्यीकरण, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करीब रु १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न रु ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सी… पुरा पढौ
आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५% हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आव २०७८/७९ का लागि शनिबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम तथा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख भई आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किने विश्वासका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुद्रास्फीति दरलाई पनि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले… पुरा पढौ
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड (बजेटकाे पूर्णपाठ)
काठमाडाैं, १५ जेठ । नेपाल सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सिंहदरबाट बजेट सार्बजनिक गरेका हुन । चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ६१ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन भएको छ । प्रदेश तथा स्थानिय तहतर्फ ३ खर्ब ७१ करोड बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेट स्रोतको लागि आगामी वर्ष… पुरा पढौ
काेराेना नियन्त्रण तथा राेकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन
काठमाडाैं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले कोभिड १९ काे उपचार तथा राेकथाम नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको बताए । उनले सबै नेपालीलाई खोपको सुनिश्चितता गरिने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले अक्सिजन प्लाण्टलगायतका आवश्यक कामका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । अस्पतालहरूमा आफ्नै अक्सिजन… पुरा पढौ
सरकारकाे बजेट सार्वजनिक: कोभिड-१९ खोपको लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन, बृद्ध भत्ता चार हजार पुग्याे(लाइभ)
काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को वजेट सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज तीन अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेल वजेट सार्वजनिक गर्नका लागि सिंहदरबार गएका हुन । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सुनाएका छन् । आज सिंहदरबारबाट आर्थिक वर्ष २०७८, ०८९ को वजेट सार्वजनिक गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशतसम्मको हुने बताए । कोभिड १९ को खोपको लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन… पुरा पढौ
अर्थमन्त्री पौडेल वजेट सार्वजनिक गर्न सिंहदरबार पुगे
काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को वजेट सार्वजनिक गर्नका लागि सिंहदरबार पुगिसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज तीन अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेल वजेट सार्वजनिक गर्नका लागि सिंहदरबार गएका हुन । पुरा पढौ